Apple wuxuu siidaayay Bruce Springsteen Dukumiinti Documentary ka ah Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu sii daayay Trailer Documentary soo socda Bruce Springsteen on Apple TV +
Qof kastaa wuu ogyahay xiisaha uu Apple waligiis u qabay muusikada. Qalabkii ugu yaraa ee kumbuyuutar ee "yar" wuxuu ahaa iPod. Shaqooyinku waxay soo saareen 2001. Sannado badan ka hor intaan iPhone soo if bixin.
Jacaylkaas muusiguna wuxuu kusii soconayaa Cupertino. In kabadan 80 milyan oo isticmaaleyaal ah ayaa dhagaysta maalin kasta iyada oo loo marayo Apple Music. Jacaylkan ayaa sidoo kale ka muuqda Apple TV +. Maanta trailer-ka dukumintiga xiga ee albumka cusub ee Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen ayaa sii deyn doona album cusub. Albamka ayaa cinwaan looga dhigay «Warqad adiga kuu socota«. Wuxuu ku duubay "E Street Band." Markii ugu dambeysay ee ay wada ciyaaraan waxay ahayd 35 sano ka hor, haddana waxay markale ku kulmayaan albumkan. Ku dhowaad waxba.
Daahfurka albumka cusub ayaa ka dhici doona gaar u ah Apple. Isku soo wada duuboo, Oktoobar 23, dukumiinti ka kooban albumka cusub ayaa laga sii deyn doonaa Apple TV +, dhanka kalena, albamka waxaa lagu sii deyn doonaa Apple Music isla maalintaas. Ayaa garanaya waxa "The Boss" ay ku soo oogi doonaan kuwa gaarka ah.
Documentary-ga "Bruce Springsteen Waraaqda Adiga Kuusoo Bandhigay" Waxay Muujineysaa Duubista Tooska ah ee albumka soo socda ee Springsteen ee "Warqad Adiga" oo ay kujirto E Band Band oo dhammaystiran, waxaana ku jira bandhigyo 10 heeso ah oo ka socda albumka cusub. Documentary-ga wuxuu ku soo bandhigayaa waxqabad buuxa kooxda E Street Band, muuqaalada istuudiyaha, muuqaalo aan waligood horay loo arag, iyo aragti qoto dheer oo ku saabsan Bruce Springsteen oo u gaar ah "Waraaqda Adiga."
Kani waa dokumenterigii labaad ee muusig ee lagu soo bandhigo Apple TV +. Midka koowaad wuxuu ahaa "Sheekada Wiilasha Beastie." Maanta Apple waxay YouTube ka soo saartay muunad muujinaysa waxa uu noqon doono dokumenterigan "Warqad Adiga ah" ee aan ku arki karno aduunka hortiisa iyo gaar ahaan barnaamijka Apple. 23 bisha Oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple wuxuu sii daayay Trailer Documentary soo socda Bruce Springsteen on Apple TV +
Disney waxay cusbooneysiineysaa buugeeda laga heli karo iTunes Store ilaa 4K bilaash
Dukaammada Apple ayaa joojiya iibinta kuwa saddexaad iyo kuwa sameecadaha leh